Miantoka ny fiveloman’ny mponina anjatony maro ao amin’ny kaominina Ambalamanakana sy Ambatofitorahana, distrikan’Ambositra, ny fambolena géranium ahodina hanaovana lohamenaka (huile essentiel). Misy ny fandriampahalemana any an-toerana hatramin’ny nahavitana drafi-panajariana nahazoana alalana mamboly io karazan-kazo io. Mivondrona ao anatin’ny kaoperativa Hanitriniala ireo mpamboly, fianarana manodina lohamenaka sy mamerina ny ala. 30 000 fototra izao ny zana-kazo kininina nambolena sy arahi-maso any amin’io faritra io. Mihena ny doro tanety sy ny fanaovana saribao tato anatin’ny efa-taona.
Mirongatra ny fihadiana tsy ara-dalàna volamena any amin’ny faritra Betsiboka, hatramin’ny nampiharana ny fihibohana. Betsaka ny manararaotra ny toe-javatra ankehitriny, ireo mpanam-bola mampiasa olona mitrandraka tsy ara-dalàna volamena any amin’ireo kaominina ambanivohitra maro ao anatin’ny faritra Betsiboka. Malalaka ny fivezivezen’ireo fiaran’olon-tsotra, misy amin’izy ireny ny manao trafika mitatitra volamena miakatra aty an-dRenivohitra. Tsiahivina fa tafakatra 200 000 Ar izao ny 1 g amin’ny volamena.
Manaiky ny fandaminana ny mpivarotra ao Marovoay, mampihena ny ora fivarotana eny an-tsena, noho ny hamehana ara-pahasalamana. Manaiky ireo mpivarotra noho ny antony ara-pahasalamana ho fitsinjovana ny vahoakan’i Marovoay, ho an’ny fahasalamam-bahoaka, ka tsy tombontsoan’ny olom-bitsy no zahana fa ho an’ny rehetra, hoy ny solontenan’izy ireo. Manamafy ny fandraisana andraikitra ireo mpivarotra ireo hisorohana ny fihanaky ny valanaretina any Marovoay, faritra Boeny manontolo. Tambin’izany, matiantoka na mihena ny vola miditra amin’izy ireo, izay maro ny mpivarotra legioma sy trondro.